Xabsigii Mandela Oo Habeenkii Lagu Kireynayo $250,000. | Awdalmedia.com
Xabsigii Mandela Oo Habeenkii Lagu Kireynayo $250,000.
Thu 05 July 2018.
Waxaa dalka Koonfur Afrika lagu qabtay carwo lagu kireynayo xabsigii uu mudada dheer ku xirnaa madaxweynihii hore ee dalkaas Nelson Mandela, waxaana habeenkii lagu seexanayaa lacag dhan $250,000 ama rubuc malyuun doolar.
Waxaa halkii habeen ku hoyanaya xabsigan illaa 67 qof , halkaas oo ahayd xabsi si weyn loo illaaliyo.
Mandela ayaa 18 sano ku jiray xabsiga, isaga oo wadarta guud xirnaa 27 sano, muddooyin kalena kusoo qaatay xabsiyo kale.
Hay'ad lagu magacaabo CEO Sleepout , taas oo doonaysa in ay xusto maalinta Mandela oo ku beegan 18-ka bishan .
Mandela oo u xirnaa, lana dagaalamay nidaamkii midab takoorka Koonfur Afrika ayaa geeriyooday sanadkii 2013-kii isaga oo 95 jir ah, wuxuuna sanadkan noqon lahaa 100 sano jir.
Dadka yabooha xabsiga ku tartamaya ku hoyashada xabsiga ayaa qofka bixiya lacagta ugu badan waxa uu habeen ku hoyanaya isla qolkii lagu hayay Madela, wuxuuna ku seexanayaa sariirtiisii.
Illaa 3 sariirood ayaa illaa hadda lasoo bandhigay, balse xabsiga oo leh sariiro kale oo badan ayaa laga yaabaa in kuwa kale oo badane la kireeyo.
Xabsiga waxa uu ku yaalaa jasiiradda Robben Island, taas oo ka baxsan magaalada Cape Town, dhinac kastana ay biyaha badda uga hareereysanyihiin.
Sifada kaliya ee lagu tagi karo ayaa ah gaadiidka badda, waxaana jira rixlooyin doomo waaweyn ah oo maalin kasta geeya boqolaal dalxiisayaal ah.
Jasiiradda ayaa ah meel degaan ah oo ay degenyihiin dad shacab ah, waxaana ka dhacda doorashooyinka dalka Koonfur Afrika.
Balse dadka degen ayaa aad u yaraanayay kadib markii ay gabaabsi noqdeen kaydkii biyaha macaanaa ee jasiiradda, waxaana loo baahday in biyo macaan looga keeno magaalada xitaa sanado ka hor intii magaalada Cape Town uusan ka dhicin qalalaasaha biyo la'aanta.
Jasiiradda waxa ay noqotay goob Hiddo-Dhawr ah oo ay aqoonsantahay hay'adda dhaqanka ee Qaramada Midoobay ee UNESCO, waxkasta oo halkaas yaalana waxaa lagu illaaliyay shuruucda Qaramada Midoobay.
Maalinta Mandela ayaa waxaa aqoonsatay Qaramada Midoobay sanadkii 2009-kii, sanadkastana waxaa laga xusaa dalka Koonfur Afrika. Waxa dadka ay sameeyaan adeeg bulsho muddo 67 daqiiqo ah oo ka dhigan 67-dii sano ee uu halganka ku jiray noloshiisa.